ဆေးစားဆေးသောက်မမှားဖို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဆေးစားဆေးသောက်မမှားဖို့
Posted by ခင်ခ on May 31, 2012 in Copy/Paste | 15 comments
အခုခေတ်ရောဂါတွေလည်း များလာသလို ဆေးတွေလည်း စုံနေတယ်။
ငယ်ငယ်တုံးကဆေးသောက်ခါနီးဆို အစာစားပြီးမှသောက် အစာစားပြီးပြီလား လို့လူကြီးတွေသတိပေးခဲ့ ကြတယ်။အခုကြီးလာလို့ စာတွေဖတ်တော့မှသိလာရပြီး အစာစားပြီးသောက်ရတဲ့ဆေး အစာမစားမီ သောက်ရတဲ့ဆေးနဲ့ ဆေးသောက်ပုံတွေကို ဗဟုသုတသိအောင် ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တိုလီမိုလီစာစုထဲက ပြန်ရေးပြပါရစေ။
တချို့ဆေးတွေက အစာမစားမီ သောက်ရပါတယ်။ အစာမစားမှီ သောက်ရတဲ့ဆေးဆိုရင် အစာတစ်ခုခု မစားမီ နာရီဝက်အလိုဆိုတာ သိထားရပါ့မယ်။ အစာမစားမီ အနေအထားမှာ အစာအိမ်ဟောင်းလောင်း အနေအထားမို့ဆေးဟာအစာအိမ်ထဲရောက်တဲ့အခါ အားပျော့စရာ အကြောင်းမရှိလို့ ပိုထိရောက်ပါတယ်၊ ဥပမာ- အူလမ်းကြောင်းကူးဆက်ရောဂါကုသဆေး၊၀မ်းပိတ်ဆေး၊သည်းခြေဆေး၊ကျောက်ပျော်ဆေး၊ အစာအိမ်အနာအတွက် အချဉ်ဓာတ်ထိန်းဆေး စသည့်ဆေးများဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ဆေးတွေက အစာစားပြီးသောက်ရပါတယ်၊ အစာစားပြီးသောက်ရတဲ့ဆေးတွေကို အစာစားပြီး ၁၅-၃၀ မိနစ် အတွင်းသောက်သင့်ပါတယ်။ အစာစားပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက်မသောက်သင့်သလို၊ ဆေးသောက်ဖို့သတိရတဲ့ အစာစားပြီး ၁ နာရီ ၂ နာရီ ကြာမှ သောက်တာမျိုးလည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အစာစားပြီး ဆေးသောက်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဒီဆေးတွေက အစာအိမ်နံရံကို ထိခိုက်နိုင်လို့ ဆေးနဲ့အစာအိမ်နံရံတိုက်ရိုက်မထိခိုက်အောင် အစာအရင်စားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးတွေကို အစာမရှိဘဲစားရင် ပျို့ အန် တာတို့၊ အစာအိမ်မအီမသာ တာတို့ ၊ အစာအိမ်အောင့်တာတို့ အခန့်မသင့်ရင် အစာအိမ် သွေးထွက်တာထိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆေးအများစုဟာ အစာစားပြီးမှ သောက်ရတာများပါတယ်။
တချို့ဆေးတွေကျတော့ ထမင်းစားရင်း အတူသောက်ရတာမျိုးပါ။ ထမင်းနဲ့အတူစားရတာက ဆေးနဲ့အစာ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပေါင်းစပ်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- အစာစားလိုစိတ် ပြင်းပြဖို့နဲ့ အစာကြေဖို့ သောက်ရတဲ့ဆေးမျိုး၊ အူလမ်းကြောင်းထိပါးနိုင်တဲ့ဆေးမျိုး တွေဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဆေးစား ဆေးသောက်ရင် ရေကျက်အေး(သို့မဟုတ်)ရေအေး နဲ့ဘဲသောက်သင့်ပါတယ်။ ရေမသုံးဘဲ တံတွေးနဲ့မျိုမချသင့်ပါဘူး၊ ဆေးပြားအခြောက်တွေကို ရေမပါဘဲသောက်ရင် အစာပြွန်အမြှေးပါးကို ထိပါးလှိုက်စားပြီး ရောင်ရမ်းတာ၊ သွေးထွက်တာ ၊ အစာအိမ်အနာဖြစ်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆေးကို လဘက်ခြောက်ခပ်ထာတဲ့ ရေနွေးကြမ်း၊ နွားနို့ ၊ သစ်သီးဖျော်ရည် တို့နှင့်လည်း မသောက်သင့်ပါဘူး၊ လက်ဖက်ခြောက် အဖန်ရည်မှာ Tannic Acid အများအပြားပါတာကြောင့် တစ်ချိူ့ထဲက Alkaloid နဲ့ဓာတ်ပြုပြီး ဆေးအာနိသင်အပိုင်းကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ နွားနို့မှာ ပရိုတင်းဓာတ်တွေနဲ့ ဖက်တီအက်စစ်တွေပါတာမို့ ဆေးကို အစာအိမ်နဲ့ အူနံရံတို့က စုတ်ယူတဲ့အခါမှာ အခက်အခဲဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်၊ သစ်သီးဖျော်ရည် ထဲမှာ အက်ဆစ်ဓါတ်တွေပါနိုင်တာမို့ ဆေးနဲ့တွေ့ရင် ဆေးအာနိသင်ဓါတ်ပျယ်မှု့ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့်ဆေးသောက်ရင် ရေကျက်အေး (သို့မဟုတ်) ရေအေးနဲ့ သောက်တာ အသင့်လျှော်ဆုံးပါ။
တချို့ဆေးတွေက ဆေးသောက်ရင် ရေများများသောက်ပေးရတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်၊ ဆာဖာအုပ်စုဆေးတွေနဲ့ ကျောက်ပျော်ဆေးတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဆေးစားဆေးသောက်ရာမှာ ဆရာဝန်ညွှန်းကြားတဲ့ အတိုင်း သေချာသောက်ပေးကြဖို့နဲ့ အလွယ်တကူ မိမိသဘောဆန္ဒနှင့်ဝယ်ပြီးသောက်သုံးနေတာမျိုး မပြုလုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
လူတိုင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ နေနိုင်ကြပါစေ။
ပါရာစီတမော ၅၀၀ ပါဘဲ ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပါရာစီတမော ၅၀၀ ကို အအေးမိနှာစေးဖျားနာပျောက်ပါတယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးမင်းသားနဲ့ တီဗီမှာလွှင့်လိုက်တော့ တစ်လုံးကို ၂ ကျပ် – ၈ ကျပ်တန် ကနေ တစ်လုံး ကို ၅၀ ကနေ ၆၀/၇၀ ဖြစ်သွားပါတယ် ။ လူထုကလဲ ၊ အအေးမိဖျားနာ ဖြစ်တဲ့အခါကြ ၊ ဟိုမင်းသားလေးကြေငြာတဲ့ဆေးသောက်မှဘဲ ဆိုပြီး အလွယ်တစ်ကူ ဆေးဆိုင်ကနေ ဝယ်သောက်လိုက်တယ် ။ ၁ လုံး နဲ့ သက်သာရင် ၁ လုံးနဲ့ ရပ်လိုက်တယ် ။ ၂ လုံးနဲ့ သက်သာရင် ၂ လုံး နဲ့ ရပ်လိုက်တယ် ။ ဆေးပတ်မမှန်တော့ဘဲ ၊ နောက်တစ်ခါ ဖျားနာတဲ့အခါကြ ဆေးမတိုးဘူး ဆိုတာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါတော့တယ် ။
ဆရာဝန် မဟုတ် ။ သာမန်အရပ်သားစကားမို့ အမှားပါသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါဗျို့ ။
ဘီယာ တစ်ဝိုင်းတိုက်ရင် ခွင့်လွှတ်မယ်ညီစ်လေးစ်.
ကြော်ငြာစရိတ် ထပ်ပေါင်းလိုက်တော့ ကုမ္ပဏီ ကောင်းစားဖို့ ဖြစ်တာပေါ့ ..
အမှန်က ပါရာစီတမော ပဲ .. အခုတော့ ဘိုင်အိုဂျက်ဆစ်မှ ကောင်းတယ် တို့ လန်းဆန်းမှ ကောင်းတယ် လို့ .. ကာပေါမှ ကောင်းတယ်လို့ ဖြစ်ကုန်ပြီ .
ဒေါက်တာပျောက်နေတာ ကြာပြီနော် ။
ပရော့ဂျက်တွေများနေတယ်ထင်ပါရဲ့ …. ။
ပညာပေးပို့စ်လေးတွေ အချိန်ရလျှင် ရေးပေးဖို့ အတွက် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်နော် ။
အဟီး ကျွန်တော်ကတော့ ဘိုင်အိုဂျက်ဆစ် ပရိသတ် .. ဘယ်သူနဲ့ ကြော်ငြာမှန်းတော့မသိဘူး .ဒါပေမဲ့ အစာအိမ် ဒုက္ခမပေးဘူး အစာ မရှိလည်း သောက်လို့ ရတယ်ဆိုလို့ အားပေးတာ … ဒါပေမဲ့ အမြဲတမ်းတော့ အစာစားပြီးမှ သောက်တယ် ..
ပါရာစီတမောက တော့ ဆေးပါတ် လည်စရာမလိုဘူးလားလို့ ကိုပေရဲ့ ..
အဲဒါကြောင့်မို့ ၊ ကျွန်တော် ကွန်မင့်ပြီးပြီးချင်းမှာ
ဆရာဝန်မဟုတ်လို့ ၊ ဆေးအကြောင်းလဲ ဗဟုသုတ လွန်စွာအားနဲ
တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျား ။ ကျွန်တော် ပြောနိုင်တာကတော့ ၊ တရုတ်က ဝင်တဲ့ ပါရာစီတမော တစ်လုံး ၂ကျပ် ၃ကျပ် ၄ကျပ်
ခင်ဗျားက ဆေးပေးစက်မှာလုပ်ပြီးဒေ့ါ..ဆေးအကြောင်းတောင် ကောင်းကောင်း မသိဘူးလားဗျ
အတော်များများကလေ … အစာစားပြီးမှ သောက်ရမယ်လို့ပဲ သိတာ .. အခုလို ရှင်းပြပေးတာ ဗဟုသုတရပါတယ် ကိုခင်ခရေ … ။ ဘယ်ဆေးက ဘယ်အချိန်မှာသောက်ရမလဲ ဆိုတာကတော့ …. နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ သူတွေနဲ့ ဗဟုသုတလိုက်စားသူတွေပဲ သိမယ်ထင်တယ်နော် ။ ဒါ့ကြောင့်ဆေးသောက်ရမယ် ဆိုကတည်းက ဘယ်အချိန်သောက်ရမလဲဆိုတာတွေပါ ထည့်မေးသင့်ပါတယ် ။ ကျွန်မဆို ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန် ကျော်သွားလျှင် သတိရတဲ့ အချိန် ထသောက်ချင်သောက်မိလိုက်တာပဲ … ဟီး ။အချိန်တွေကိုမစဉ်းစားပဲ … ဆေးသောက်လိုက်တာနဲ့ တာဝန်ပြီးပြီလို့ကို ခံယူထားသလိုပဲ … :D :D
တစ်ချို့ မြို့စွန်နဲ့ …. နယ်တွေမှာလေ .. အယူဆလွဲနေတာလေး တွေ့ရတတ်တာက … အားဆေးပါ … ။ ဖျားလျှင် အားဆေးမသောက်ဘူးတဲ့ …. ဖျားတဲ့ပိုးတွေ အားရှိကုန်မှာစိုးလို့တဲ့ … သူ့အယူဆနဲ့ သူကတော့ ဟုတ်နေတာပါပဲ … ။ နောက်ပြီး အရမ်းပင်ပန်းလာလျှင် .. အားဆေးတစ်လုံး စ နှစ်လုံးစ သောက်ကြတယ် .. ဘာအတွက်လဲလို့ မေးကြည့်တဲ့အခါ .. ဒီနေ့ပိုပင်ပန်းလို့ အားရှိအောင်တဲ့ … ။ အားဆေးဆိုတာမျိုးက … တစ်ရက်ထဲသောက်တာထက် … နေ့စဉ်မှန်မှန်သောက်မှ ပိုပြီးအာနိသင် ထိတာမျိုးဆိုပေမယ့် သူတို့ ငွေကြေးအရလည်း … ရှိသေးတော့ … တိုက်တိုက်တွန်းတွန်း ဘာမှ မပြောခဲ့ပေမယ့် … သူတို့ ပြောသမျှလေးပဲ .. နားထောင်လာခဲ့တယ် ။
ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တိုလီမိုလီစာစုထဲက ဆိုတော့ ဆရာဝန်ဟုတ်ဖူးပေါ့နော်……။
etone ရေ ကျွန်တော်ကို သမားတော်ကြီးတစ်ဦးကရှင်းပြဘူးတယ်။
အားဆေးဆိုတာ သူ့ကိုသောက်ရင်အားရှိလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ အခုခေတ်အားဆေးတွေက မာတီဗီတာမင်၊ သတ္တုဓါတ်အမျိုးမျိူးနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်လို့ သူ့ကိုသောက်ပေမဲ့ ခန္ဒာကိုယ်မှာ လျော့နည်းလိုအပ်တဲ့ သတ္တူဓါတ်နဲ့ ဗီတာမင်ကိုဘဲ အူနံရံတွေကစုတ်ယူပြီး မလိုတဲ့သတ္တုဓါတ်တွေက ဆီအဖြစ်စွန်ပစ်လိုက်တာပါတဲ့။ ဒါကြောင် တစ်နေ့(သို့မဟုတ်) ၂ရက်ခြားသောက်သင့်တယ်တဲ့။
ပြီးတော့ဖျားနာနေလည်း လိုအပ်နေတဲ့ ဗီတာမင်နဲ့သတ္တူဒြပ်တွေရဖို့ သောက်သင့်တယ်လိုပြောပါတယ်။
အစားအစာကို ဗီတာမင်စုံအောင် ခန္ဒာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲဒြပ်တွေစုံအောင်နေစဉ်စားဖို့ မဖြစ်နိုင်တာမို့ အားဆေးတစ်မျိုးမျိုးတော့ သောက်သင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ahnyartamar ရေ–။ကျွန်တော်ဆရာဝန်တယောက်ပါ ဆိုတာ တီဗွီကဆေးကြော်ငြာပါ။
ကျွန်တော်ခင်ခကတော့ ဆရာဝန်မဟုတ်ပါ။ အသက်လေးရလာလို့ ဆေးပညာစာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်တဲ့ထဲက
တိုလီမိုလီစာစုတွေအဖြစ် မှတ်ထားတာတွေကို ရွာသားတွေအတွက်မျှဝေတဲ့သဘောပါ။
အဲဒီတိုလီမိုလီစာစုထဲမှာ ဗေဒင်ယတြာတွေလည်းပါတယ်။ အလျဉ်းသင့်ရင်ရေးပါအုံမယ်။
အဲဒီတိုလီမိုလီစာစုထဲမှာ ဗေဒင်ယတြာတွေလည်းပါတယ်။ အလျဉ်းသင့်ရင်ရေးပါအုံးမယ်။